Karuna Mission Social Solidarity | KMSS General Assembly မှ ဟောပြောသွန်သင်ချက်များ (၂၂-၂၄.၃.၂၀၁၇)
KMSS General Assembly မှ ဟောပြောသွန်သင်ချက်များ (၂၂-၂၄.၃.၂၀၁၇)
ရဟန်းအမတ်ကာဒီနယ်လ်ချားလ်စ်ဘိုမှ “Integral Human Development” အကြောင်း မြွက်ကြားပေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကရုဏာ(KMSS) မိသားစု တွေ့ဆုံပွဲပထမနေ့တွင် ရန်ကုန်ကက်သလစ် သာသနာဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးကာဒီနယ်လ်ချားလ်စ်ဘိုမှ “Integral Human Development” အကြောင်း မြွက်ကြားပေးခဲ့သည်။
ပြည့်စုံသောလူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (IHD) ဆိုသည်မှာ ဘက်စုံသာသနာပြုခြင်း (Integral Evagelization )ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံသောလူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟူသည် လူဖြစ်ရခြင်း၊ လူတစ်ဦး၏ဂုဏ်သိကာနှင့်အခွင့်အရေးများကို ထည့်သွင်းအလေးထားဆောင်ရွက်ရသောအမှုဖြစ် သည်။ ကက်သလစ်အသင်းတော်တွင် ရဟန်းမင်းကြီး၏သံတမန်ရေးရာ ဗာတီကန်ရုံးတော်မှ (IHD) ပြည့်စုံသောလူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မရှင်ကို ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူသားအားလုံးတို့၏ဘ၀တွင် ဘက်စုံးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အသက်ရှင်ရန်လိုအပ်သည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် လူသားများအတွက် အသက်ရှင်သည်။ ခရစ်ယာန်များသည် ခရစ်တော်၏ စံနမူနာကိုယူလျက် အသက်ရှင်ကြရသည်။ စစ်မှန်သောခရစ်တော်၏ နောက်လိုက်ကောင်းများသည် လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင် တစ်တပ်တစ်အားပါဝင် အစေခံကြသူများဖြစ်ရမည် ဟုတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ အသင်းတော်သည် လူမှုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ၀တ္တရားနှင့်ဘာသာတရားဆိုင်ရာ ၀တ္တရားဟူသည့် အစေခံ ခြင်းနှစ်မျိုးဖြင့် လူသားအကျိုးပြု လုပ်ငန်းအတွက် အဓိကပံ့ပိုးပေးထားသော ဗဟိုမဏ္ဍိုင်ကြီးဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမျက်မှောက်ခေတ်တွင်တည်ဆောက်ရန် ရှင်းလင်းသော ရူပါရုံဖြင့် မေတ္တာတရားလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ရမည်။ တနည်းဆိုသော် (IHD) သည် သာသနာ ပြုခြင်းအတွက်အမည်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ကို မိမိတို့၏ အစေခံခြင်းဖြင့်ထင်ရှားစေရမည်။ လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် လူပီသခြင်းနှင့် ဘုရားဂုဏ်တော်ဖြင့် အသက်ရှင်ရခြင်းသည် အသင်းတော်ကြီးမှ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းစီထံမှ မျှော်လင့်သော အရာဖြစ် သည်။ IHD ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီအား အနက်ရှိုင်းဆုံး မေတ္တာဖြင့်ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်ကိုမြင်တွေ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ သူကို အစေခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာ၌ထာဝရဘုရားကို တရားမျှတခြင်း အရှင်ဖြစ်သည်ဟုဖေါ်ကျူးသည်။ ထို့ကြောင့် IHD ခေါ် စုံလင်သောသာသနာပြုခြင်းသည် ၀ိညာဉ်များ ကယ်တင်ရေးလုပ်ငန်းများအ တွက်သာမဟုတ်၊ တရားမျှတခြင်းစိုးမိုးရန်အတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဆင်းရဲသားများအတွက်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးရာ၌ (၁) လူ့အရင်းအမြစ်ရရှိမှု၊ (၂)ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီပံ့ပိုးပေးမှု၊ (၃) လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးရရှိမှု၊ (၄) ကျန်းမာသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရရှိမှု၊ (၅)လုံလောက်သောဘဏ္ဍာရေးရရှိမှု၊ (၆)နိုင်ငံရေးပါဝင်လှုပ်ရှာနိုင်မှု နှင့် (၇) ၀ိညာဉ်ရေးရာ အသက်တာတန်ဖိုးများရရှိမှုများကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်အမှတ်ရလျက် ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှု များပြုလုပ်ကာ အင်အားသစ်များ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းကြလျက် ကရုဏာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် ရာတွင် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းဖြင့် အစေခံကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ ၀မ်းမြောက်ရွင်လန်းခြင်း ဖြင့် အစေခံခြင်းသည် ခရစ်ယာန်များအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးလှသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းစီ၌ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်သောတန်ခိုးကို ပြုလုပ်နေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း ခေါ်တော်မူ ခြင်းခံရသည်။ ခရစ်ယာန်များသည်တရားမျှတခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်း ခြင်းကိုဖေါ်ဆောင်ရန်ခေါ် တော်မူခြင်းခံကြရသည်။ ခရစ်ယာန်သားသမီးတို့အားယုံကြည်စွာဖြင့်အပ်နှံခြင်းခံခဲ့ရသောဘ၀ဖြင့် အစေခံရန် ဘုရားရှင်ကအလိုရှိကြောင်း ပြောကြားကာ ဟောကြားချက်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
ဟောကြားချက်အပြီးတွင် တက်ရောက်သူများအားလုံးအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်မှာ - လက်ရှိKMSS ၏ အင်အားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အရည်အချင်း ပေါ်မူတည်၍ အဆိုပါအခွင့်အလမ်းခုနှစ်ရပ် ထဲမှ KMSS အနေဖြင့်နောင်လာမည့်၅နှစ်တာအတွင်း အာရုံစိုက်သင့်သော အဓိကအလိုအပ်ဆုံး အခွင့်အလမ်း (၃)ခုကိုအကြောင်းပြချက်နှင့် တကွရှင်းလင်းဖေါ်ထုတ်ခြင်း။
KMSS နာယကဆရာတော်ကြီးရေမွန်ဆွမ်လုဂမ်မှ “Sustainable Development Goals” အကြောင်း မြွက်ကြားပေးခြင်း
ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအသင်း(KMSS)၏ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ ၀န်းထမ်းများမျက်နှာစုံညီ တွေ့ဆုံပွဲ ပထမနေ့တွင် ဗန်းမော်ဂုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်သော KMSSနာယကဆရာ တော်ကြီးရေမွန်ဆမ်လုဂမ်မှ ‘Sustainable Development Goals (စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုပန်းတိုင်များ)’ ၁၇ခုအကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့်မြွက်ကြားပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ထာစစ်ကြီးအပြီးတွင် လူသားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူသားတစ်ဦးချင်းစီသည် သုခကိုစံစားရန်အခွင့်ရှိကြောင်း၊ ဤသုခစံ စားရန်အတွက် လူသားများအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကမာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်စေ ရေး၊ လူသားတိုင်းသက်တမ်းစေ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရေး၊ လက်လှမ်းမှီပြီးစိတ်ချရသောရေရှည်တည် တံ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦးတည်လျက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုပန်းတိုင်များ (၁၇)ခုမှာ -
ပန်းတိုင် (၁) နေရာတိုင်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပုံစံအမျိုးမျိုးအဆုံးသတ်ရေး။
ပန်းတိုင် (၂) ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု အဆုံးသတ်ရေး၊ အစားအစာ ဖူလုံရေး၊ အာဟာရ ပြည့်ဝရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။
ပန်းတိုင် (၃) အသက်အရွယ်မရွေး လူတန်းစေ့ ကျန်းမာရေးနှင့် သာယာဝပြောရေး။
ပန်းတိုင် (၄) လူသားအားလုံး အကျူံးဝင်မှုရှိကာ ညီညွတ်မျှတပြီး အရည်အသွေးရှိသည့် ပညာသင်ယူနိုင်ရေးနှင့် အစဉ်လေ့လာသင်ယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ရရှိရေး။
ပန်းတိုင် (၅) ကျား၊မ တန်းတူညီမျှမှု ရရှိရေးနှင့် အမျိုးသမီးငယ်များအားလုံး စွမ်းပကားတိုးမြှင့် စေရေး။
ပန်းတိုင် (၆) လူသားတိုင်း သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေနှင့် မိလ္လာစနစ် ရရှိရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်သော စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေရေး ။
ပန်းတိုင် (၇) လူသားတိုင်း လက်လှမ်းမှီမှုရှိသော၊ စိတ်ချရသော၊ ရည်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော၊ ခေတ်မှီစွမ်းအင်ရရှိရေး။
ပန်းတိုင် (၈) စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်ထွန်းပြီး အားလုံးအကျုံးဝင်သော ရည်ရှည်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ လုပ်သားပြည့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် အားလုံးအတွက် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိ၍ သင့်တင့်လျောက်ပသော အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရေး။
ပန်းတိုင်(၉) ကြံ့ခိုင်သောအခြေခံအဆောက် အအုံများတည်ဆောက်ရေး၊ အားလုံးအကျုံးဝင်ပြီး ရည်ရှည်တည်တံ့သည့် စက်မှုလုပ်ငန်း ထူထောင်ရေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို အားပေးမြှင့်တင်ပေးရေး။
ပန်းတိုင် (၁၀) နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံများကြား မညီမျှမှု လျှော့ချရေး။
ပန်းတိုင်(၁၁) အားလုံး အကျုံးဝင်သော၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိသော၊ ကြံ့ခိုင်မှုရှိသော၊ ရည်ရှည်တည်တံ့နိုင်သော မြို့ပြများနှင့် လူနေရပ်ကွက်များ ထူထောင်ရေး။
ပန်းတိုင် (၁၂) စဉ်ဆက်မပြတ် စားသုံးမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု ပုံစံများ ဖြစ်ပေါ်စေရေး။
ပန်းတိုင်(၁၃) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ယင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ လျှော့ပါးစေရေးအတွက် အရေးကြီးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရေး။
ပန်းတိုင်(၁၄) စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန် ပင်လယ်၊ သမုဒ္ဒရာနှင့် ရေသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ရည်ရှည်တည်တံ့နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် အသုံးပြုရေး။
ပန်းတိုင် (၁၅) ကမ္ဘာ လုံးဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ်အား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပြီး ရည်ရှည်တည်တံ့အောင် အသုံးပြုရေး၊ သစ်တော်များ ရည်ရှည်တည်တံ့စေရန် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် သဲကန္တာရများ ဖြစ်ထွန်းမှု ပပျောက်စေရေး၊ မြေယာပြုန်းတီးယိုယွင်းပျက်စီးမှု ရပ်တံ့စေရေးနှင့် ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ ပြုန်းတီးမှု ရပ်တံ့စေရေး။
ပန်းတိုင်(၁၆) စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်း၍ အားလုံးပါဝင်နိုင်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရေး၊ အားလုံးအတွက် အရားမျှတမှု ရရှိစေရေးနှင့် အဆင့်တိုင်း၌ ထိရောက်မှုရှိသော တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခံမှုရှိသော၊ လူတိုင်းအကျုံးဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများထူထောင်ရေး။
ပန်းတိုင်(၁၇) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ ခိုင်မာအားကောင်း စေရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ရှင်သန်အားကောင်းစေရေး စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဟောကြားချက်အပြီးတွင် တက်ရောက်သူများအားလုံးအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်များမှာ - ကျွန်တော်တို့၏ အကူအညီဆောင်ရွက်ပေးမှုသည် ထိခိုက်လွယ်ဆုံးသူများဆီသို့အမှန်တကယ် ရှောက်ရှိနိုင်မှုရှိ/မရှိနှင့် မည်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း။ နောင်၅နှစ်တွင် KMSSအနေဖြင့် ထိခိုက်အလွယ်ဆုံးသူများဆီသို့ အကူအညီများပိုရောက်ရှိနိုင်အောင် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင် မည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
မြစ်ကြီးနားဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ကြီးဖရန်းစစ်ဒေါ်တန်မှ “သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုမရှိခြင်း” အကြောင်း မြွက်ကြားပေးခြင်း
ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအသင်း(KMSS)၏ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ ၀န်းထမ်းများမျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွင် မြစ်ကြီးနားဂိုဏ်အုပ်ဆရာတော်ကြီးဖရန်းစစ် ဒေါ်တန် မှ ရဟန်းမင်းကြီးအရှင်မြတ်ဖရန်စစ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစာချွန်တော်ဖြစ်သည့် Laudato Si ကိုမှီငြိမ်းပြီး “သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုမရှိခြင်း” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မိန့်ခွန်းမြွက်ကြားပေးခဲ့သည်။
Laudato Si အကြောင်းကို မိမိ၏အတွေ့အကြုံနှင့်လက်ရှိမြန်မာပြည်၌ဖြစ်ပွားနေသော သယံဇာတ ပြုန်းတီးမှုများပေါ်အခြေခံလျက် အကျယ်တ၀င့်ဝေမျှပေးသွားခဲ့ပါသည်။ အရှင်သူတော်မြတ်ဖရန်းစစ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအပေါ် စာချွန်တော်ရေး သားခဲ့ကြောင်း၊ “ငြိမ်းချမ်းပါစေကမ္ဘာမြေ” ဟူသော အဓိပ္ပါယ်သည် (၁) လူနှင့်ဘုရားသခင် ဆက်သွယ်ရေး၊ (၂) လူနှင့်အခြားသူတစ်ဦးအပေါ်ဆက်သွယ်ရေး နှင့်(၃) လူနှင့် လူသားကမ္ဘာ ဆက်သွယ်ရေး ဟူသောအချက်အားလုံးတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤစာချွန်တော်သည် လူအများနှင့်ဆိုင်သော နေရာများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုကြောင်း အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင်ယုံကြည်စွာဖြင့်ပေးအပ်ခဲ့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆက်လက်အသက်သွင်းရန် တာဝန်ရှိကြောင်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သဘာဝကိုအမှီပြု၍ မှီတင်းနေထိုင်ကြသော လူတို့၏အသက်ရှင်ရခြင်းကို တန်ဖိုးထားရန်၊ ကုန်းနေရေနေသတ္တ၀ါများနှင့် ဂေဟစနစ်အားလုံး တို့၏ သဟဇာတဖြစ်ရေးအတွက် ကူညီထောက် ပံ့ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ယိုယွင်းလာသော ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ရန်အထူးသဖြင့် ယိုယွင်းခြင်း၏ ဆိုးကျိုးကို ခံစားရသော ဆင်းရဲသားများ ပြဿနာ၊ အခြေခံလူတန်းစားများ အပယ်ခံများ၏ ဂုဏ်သိက္ခါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ကြရန် တိုက်တွန်း ဟောကြားခဲ့သည်။ လက်ဝါးကြီးအုပ် ချုပ်မှုများပပျောက်စေရန်၊ ဘုံအကျိုးစီးပွားကို ဦးတည်ရန် သဘာဝသယံဇာတများ မျှတစွာသုံးစွဲရန် အလေးပေးဖေါ်ပြထားပါသည်။ “သဘာဝသံယဇာတ များသည် လူသားတို့၏ လုိုအပ်မှုများအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ သို့သော် လူသားတို့၏ လောဘအတွက်မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပေ (မဟာတမဂန္ဒီ)” ပြောကြားခဲ့ကြောင်း။ ဂေဟစနစ်နှင့် လူသားတို့၏အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးသဟဇာတရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီ၌တာဝန်ရှိကြောင်း၊ မတူညီသော ယုံကြည်ခြင်း၊ မတူညီသော အရည်အချင်းများဖြင့် ကမ္ဘာကြီး၏ငိုကြွေးသံကို နားထောင်ရန်နှင့် ဆင်းရဲသားများ၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊ မတူညီသော အလှအပများဖြင့် လူသားအားလုံးအကျိုးရှိရန် ကျွန်ုပ်တို၏ အင်အားများလိုအပ်ကြောင်း ခွန်အားပေးပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ဟောကြားချက်အပြီးတွင် တက်ရောက်သူများအားလုံးအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်များမှာ - ကြွယ်ဝချမ်းသာသူများသည်သဘာဝအလှတရားကို ဖျက်ဆီးပြီး၊ ဆင်းရဲသားများသည် ဤပျက်စီးမှု ဆိုးကျိူးကိုခံစားနေရသည်ဟု ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအရှင်မြတ်ဖရန်းစစ်အရှင်သူမြတ်က သင့်ကိုချီးမွမ်းပါစေ။ စာချွန်တော် (Laudatho Si) မိန့်တော်မူသည်။ KMSS အနေဖြင့်မည်သို့သောတုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မှုများ လိုအပ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးပါသည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆုံးရှူံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ပြသာနာများသည် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကို ဒုက္ခရောက်စေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များဆုံးရှူံးနေမှုကြောင့်ဖြစ်သော ပြသာနာများကို ဖေါ်ထုတ်ကြပြီး KMSSအနေဖြင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည့်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရပ်များကိုလည်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။
တောင်ကြီးဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဘာစီးလျှိုအားသိုက် မှ “ဘဝထဲက သမ္မာကျမ်းစာ၊ သမ္မာကျမ်းစာထဲက ဘဝ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြွက်ကြားခြင်း
တောင်ကြီးဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးက “ဘ၀နဲ့ကျမ်းစာတစ်ထပ်တည်းကျပြီလား” ဟု ၀န်ထမ်းများအားလုံးအား မေးခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ဆရာတော်က သခင်ခရစ်တော်၏ဘ၀သည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်တစ်ထပ် တည်းကျခဲ့သည်။ (ရှင်လုကာ ၄း၂၂) ပြည့်စုံချင်းသို့ရောက်လေပြီ။
ဆင်းရဲခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကို လိုတမရခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်သည် (သို့မဟုတ်)ရတာမလိုခြင်း သည် ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်နှစ်မျိုးထွက်သော ဆင်းရဲခြင်း၏ဝေါဟာရကို ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာပြည်၏ ဆင်းရဲသားများ၏ဘ၀အထွေထွေကို ရှင်းပြကာ ကရုဏာဝန်ထမ်း များ၏တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများသည် ဆင်းရဲသားများ၏ဘ၀လှပရန်ဖန်တီးပေးရမည်။ (ဆီရ ၄း၆) ၌ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း ခရစ်ယာန်တိုင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားကို ကျင့်ဆောက်တည်လျက် လက်ဆင့်ကမ်းရန်လိုကြောင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားထိခိုက်သူသည် ဘုရားသခင်နှင့် လူတို့၏ဆက် ဆံရေးကို ထိခိုက်စေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့ အားကိုးရာမဲ့သူများအပေါ်တွင် အချိန်ရှိသမျှဂရုစိုက်မှုလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆင်းရဲသားတို့၏ဘ၀ကိုသနားညှာတာဖို့ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ပေးသော ၀မ်းမြောက်ရွင်လန်းခြင်းကို ဆင်းရဲသားများနှင့်အတူ ထပ်တူသီဆိုကြရန်လိုကြောင်း (ဟေရှာယ၁၂း၆)တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည် “ရွှင်လန်းစွာသီချင်းဆိုကြလော့”။ (ဟေရှာယ၄၀း၉) “၀မ်းမြောက်စရာသတင်းကောင်းကို ဂျေရုဇ လင်မြို့အတွက်ကြေညာဟောပြောလော့”။ ခရစ်ယာန်တို့၏အသက်တာသည် ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်း၏၀မ်းမြောက်ရွင်လန်းခြင်းကို သက်သေခံသောဘ၀ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုပျှော်ရွင်ခြင်းသည် အများအကျိုးအတွက် လုပ်ဆောင် ခြင်းနှင့် ကရုဏာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းမှရရှိသည်။ သမ္ပ္မာကျမ်းစာနှင့် အသက်ရှင်သောသူသည် ထာဝရဘုရား၏ရွင်လန်းခြင်းနှင့်အသက်ရှင်သော သူဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးတရားမျှတမှုအတွက် မိမိတို့၏ ရက်ရောခြင်းလိုအပ်သည်။ အတိုင်းအဆ မရှိချစ်တတ်သော စိတ်ဓါတ်သည် အတိုင်းအဆမရှိသော သိက္ခါကိုချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများအားလုံးအတွက် သိက္ခါကိုပေးသော မေတ္တာတရားဖြစ်သည်။ (မာတေးဦး၂၅း၄၀) “....အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားပြုကြ သမျှတို့ကို ငါ့အားပြုကြပြီဟု မိန့်တော်မူလတံ့။” ဘာသာတရားသည် လူသားဘ၀၏ ပဲ့ကိုင်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကောင်းကင်ခရီးသို့ရောက်ရှိဖို့ရန်ဘာသာတရား၏ အနှစ်သာရကို မိမိနှင့်ယူဆောင်သွားရမည်။ မိမိသုခရရန်အတွက် တစ်ပါးသူကို အသုံးပြုသည့် စိတ်ထားသည် မတရားမှုမြောက်သည်။ မိမိအသိုင်းအ၀ိုင်းပျော်ရွင်ဖို့ရာအတွက် အခြားသူများ မျက်ရည်ကျရခြင်း သည် မတရားမှုမြောက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆင်းရဲသားများကို မချန်ထားဘဲ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၌ ပါဝင်စေရမည်။ ဆင်းရဲသားတို့၏ ဆွေးနွေးမှုများကို လေးစားတတ်ရမည်။ ဆင်းရဲသားများကို နာခံတတ်ရမည်။ “Woe to me if I don’t proclaim the gospel”.
ဟောကြားချက်အပြီးတွင် တက်ရောက်သူများအားလုံးအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်များမှာ ဤကမ္ဘာမြေကြီးသည်ကြွယ်ဝချမ်းသာသည်ဟု ပုပ်ရဟန်းမင်း ကြီးအရှင်မြတ်ဖရန်းစစ်က မိန့်တော်မူသည်၊ သို့သော်အနည်းငယ်မျှသောအကျိုးအမြတ်သာလျှင် ဆင်းရဲသားများရရှိသည်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး အခြေအနေသည်မည်သို့ရှိကြောင်း နှင့် ကျွန်ုပ်တို့KMSSအနေဖြင့်လူအများစုဆီသို့ တရားမျှတမှု ရရှိအောင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင် မည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဆင်းရဲမှုအခြေအနေမည်သို့ရှိကြောင်း၊ ကျွနိုပ်တို့ KMSS အနေဖြင့်ဆင်းရဲသားများ၏ စီးပွားရေးတရားမျှတမှုရရှိအောင် ဘယ်လိုကူညီ ဆောင်ရွက်းပေးမည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် သာသနာနယ် သုံးခုမှ ဝေမျှခြင်း
“ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ကြုံတွေ့နေရသောငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စိန်ခေါ်ချက်များနှင့် ရှေ့အနာဂါတ်လုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် KMSS မှ ဖော်ဆောင်သွားနိုင်ရန်” ဖာသာရ် ဟျူးဘတ်မျိုးသန့်ဦး (ကရုဏာမော်လမြိုင်-ဒါရိုက်တာ)၊ ဖာသာရ် လူဒိုဗီးကိုစောပီးကို(ကရုဏာတောင်ငူ-ဒါရိုက်တာ)နှင့် ဖာသာရ် လွီးဂျီလဂျွန် (ကရုဏာလားရှိုး-ဒါရိုက်တာ)တို့မှ မိမိတို့၏အတွေ့အကြုံ နှင့် ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်များအပေါ် အခြေခံ ဝေမျှပေးခဲ့ပါသည်။
ဖာသာရ် ဟျူးဘတ်မျိုးသန့်ဦး ၏ဝေမျှချက်
ငြိမ်းချမ်းရေးပျောက်ဆုံးသွားသောကလကိုစမယ်ဆိုလျှင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်ကနေစရမှာဖြစ်တယ်ဟု အစပျိုးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရပြီး ပြည်တွင်းပရိပက္ခများဖြစ်လာသောအချိန် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ တောင်ပိုင်းများတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် KNU၏ တော်လှန်ရေးနေ့ အဖြစ်စတင်ကျင်းပ၊ ထိုမှ တစ်ဆင့် တစ်နိုင်ငံလုံးပြန့်နှံ့ခဲ့ကြောင်း။ တနသာင်္ရီတိုင်း ပလော၊ ပလောက်၊ ပဒဲ ဒေသများတွင်လည်း လူမျိုးရေးပရိပက္ခအကြီးအကျယ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း။ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေကြီးထွားလာကြောင်း၊ ထိုစဉ်အခါက ထိုပြသာနာကို ဖြေရှင်းဖို့ရာမရှိခဲ့ကြကြောင်း။ ထိုသို့နေလာရင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို စတင်လုပ်ဆောင်သူများမှာ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများဖြစ်ကြောင်း။ ဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီးဦးစန္ဒီပါနှင့် ကက်သလစ်ဘုန်းတော် ကြီးဦးဂျိုးဇက်မောင်ဝင်း(သင်္ဃန်း အဖြူတစ်ပါးနှင့် အ၀ါတစ်ပါး)တို့မှ “ငါတို့ ဗမာ နှင့် ကရင် ဒီနေ့ကစပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီ” ဆိုပြီး ပဒဲရွာတွင်အတူတကွကြေငြာကာ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့စတင်ခဲ့သော်လည်း အချင်းချင်း လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုတွေနဲ့ မယုံသင်္ခါမှုတွေကတော့ အပြန်အလှန် ရှိနေသေးကြောင်း။ ၁၉၉၅ ဘာသာရေးကနေ ဆွပေးနေကြတာလည်းရှိခဲ့ကြောင်း။ တနလာင်္ရီတိုင်း စံပြအဖြစ်နေထိုင်လာစဉ် ၁၉၉၆-၇ခုနှစ်တွင် တနလာင်္ရီတိုင်းရှိရွာပေါင်း ၉၀ ကျော်ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့သောနေရာတွေမှာ ၃ နှစ်အတွင်း ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ကုပ္မဏီတွေဝင်လာကြောင်းနှင့် Land right abuses တွေဖြစ်ကြောင်း။ ထိုဒေသမှာ မွန် ၊ဗမာ နှင့် ကရင်ရောနေကြကြောင်း၊ ပြသာနာမှ ထိုမြေမှ ဒေသခံများလုံးဝပြန်နေလို့မရတော့ကြောင်း၊ သိမ်းထားတာ ဧက ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိသော်လည်း စိုက်တာက ဧက ၅၀၀၀ ကျော်သာရှိကြောင်း။ ထိုထိမ်းထားသောမြေထဲမှ သစ်တွေကို ထုတ်သွားမှုရှိကြောင်း၊ ထိုသို့သောပြသာနာများ ဖြစ်နေသောအခါ ကရုဏာအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ ရပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များကို Advocacy ၀င်ဖို့လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် အကျယ်တ၀င့်ပြော ကြားခဲ့သည်။
ဖာသာရ် လူဒိုဗီးကိုစောပီးကို ၏ဝေမျှချက်
NCAကို ကေအမ်ယူများလက်မှတ်ထိုးခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြခြင်း။ ၁၉၄၈ခုနှစ် မြန်မာလွတ်လပ် ရေးရရှိပြီးနောက် လိပ်သို တောင်ငူ ဘားအံ စသော ဘက်များတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအခြေအနေများ ကိုဝေမျှခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားသပိတ်မှ မိမိ၏ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်ပေါ်အခြေ ခံပြီး နိုင်ငံရေးမသာယာသောအချိန်မှာ အပြစ်မရှိသော ပြည်သူများမည်သို့တွေ့ကြုံခံစားရကြောင်း ကိုအဓိကထားပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထူထောင်တော့မည်ဆို ပထမဆုံး လိုအပ်တာက ငြိမ်းချမ်းရေးဘဲဖြစ်ပါကြောင်း။ ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိရင် ဘယ်လိုမှ ပြန်လည်ထူထောင်လို့ မရနိုင်ပါကြောင်း။ NCA ဖော်ဆောင်ခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် မိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြောင်း။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ပရောဂျက် တစ်ခုအနေနဲ့သွား ကြောင်း။ ဇုန် ၃ ဇုန် (ထားဝယ်ဇုန်၊ဘားအံဇုန်၊ပဲခူးနှင့်တောင်ငူဇုံ) ခွဲပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဒေသခံများဆီသို့သွားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပက်သက်ပြီး ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ ဘာပြောချင်လဲ၊ ဘာတောင်းဆိုချင်လဲ ဆိုပြီးမေးမြန်းပါကြောင်း။ အမြင်ဖွင့်သင်တန်းများပေးပြီးသူတို့ဆီမှအသံများအချက်အလက်များကို ကေအမ်ယူခေါင်းဆောင် များနှင့် သွားပြီးတိုင်ပင်ရကြောင်း။ ထိုအချက်အလက်များကို ကေအမ်ယူခေါင်းဆောင်များက လက်ခံမှသာလျှင် NCA ဖြစ်လာပါကြောင်း။ လက်မခံရင် ဖြစ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို ဒေသခံနှင့် ပြန်လည်တိုင်ပင်ရကြောင်း၊ ၃နှစ်ကြာလာပြီးနောက်ပိုင်း ကေအမ်ယူမှ ဒေသခံပြည်သူများ၏ အခက်အခဲ အသံများကိုနားထောင်ပြီးနောက် NCA လက်မှတ်ထိုးနိုင်သည့် အဆင့်သို့ ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အခုအချိန်မှာ ကရင်ပြည်သူတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ကိုင် ရှာဖွေစားသောက်၍ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း သွားလာလှုပ်ရှားလို့ရခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး နောက်ပိုင်းအားသာချက်တွေရှိသလို အားနည်းချက်တွေလည်း ရှိပါကြောင်း စသည်ဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်။ မိမိဒေသ၏အနာဂါတ်အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။
ဖာသာရ် လွီးဂျီလဂျန် ၏ဝေမျှချက်
လိုအပ်ချက်ကို တွယ်တာစွဲလမ်းမှုကြောင့် လိုအပ်ချက်ကနေ ပြသာနာတွေဖြစ်လာကြောင်း၊ ပဋိပက္ခဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းမှာ အတွေးအခေါ်သည် အခြေခံဖြစ်ပါကြောင်း။ အတွေးအခေါ်မတူလျှင် စံထားမှုတွေမတူနိုင်ပါကြောင်း။ နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း များကိုလုပ်သောအခါ အချက် ၃ ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောာင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိသောသူများကို တည်ဆောက်ခြင်းသည် Civil Society, state building နှင့် Peace building ဤသုံးခုကို အဓိကဦးတည်ပြီးလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လုပ်ဆောင်သောအခါ အောက်ပါအချက် ၄ ချက်ကို ကျော်ဖြတ်ရကြောင်း။
၁။ ပမာဏငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းကို နိုင်ငံတော်ကလုပ်ဆောင်ခြင်း
၂။ အပြစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်း NCA
၄။ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက် (အခြေခံ ဥပဒေပြဒါန်းချက်များ) constitution တို့ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် NCA ထိုးပြီးသော အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးသောအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် NCA မထိုးရသေးသောအဖွဲ့အစည်းအမည်များကို(အပြစ်အခတ်တော့ရပ်စဲပြီး လက်မှတ်မထိုးရသေး) အကျဉ်းချုပ် ကိုးကားပြောကြားခဲ့သည်။ ကချင် ပဋိပက္ခ နောက်ခံသမိုင်းဖြစ်စဉ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၁ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း စစ်ရှောင် ၁၂၀,၀၀၀ ဦးခန့်ရှိကြောင်း။ ထိုစစ်ရှောင်များအတွက် ကရုဏာ ၄ ရုံးပူးပေါင်းပြီး အစီအစဉ်များရေးဆွဲရကြောင်းနှင့် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးပေးနေကြောင်း။ Peace သင်တန်းများပေးနေခြင်းအပြင် အခြားသော ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း များလည်းလုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဥပမာ- နိုင်ငံရေး Local အာဏာပိုင်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ ဆရာတော်လေးပါး၏၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူ Peace Advocacy Stamement ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရထံ တင်ပြပေးခြင်းနှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများလည်းရှိကြောင်း။ “စစ်ကိုရပ်” ဆိုသော ဆောင်ပုဒ်ပါသည့် ဆိုင်းဘုတ်များဖြင့် ချီတက်ခြင်း၊ ဟောပြောခြင်းတို့ဖြင့် ချဉ်းကပ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြောင်း၊ လေးဘာသာပေါင်းပြီး Demonstration ပြုလုပ်သည်များလည်း ရှိကြောင်း။ ဆုတောင်းခြင်းပြုလုပ်ပေးမှုလည်းရှိကြောင်း။ JST အဖွဲ့ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ မဟာဗျူဟာပိုင်းမှာအဓိကလုပ်ဆောင်နေသော ဒေသခံ NGO အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဒီဗွီဘီကို သတင်းတင်ပြခြင်း၊ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခြင်းလည်းရှိကြောင်း။ Advocacy Statement, lobby ပြုလုပ်မှုများရှိကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ NCA လက်မှတ်မထိုးရခြင်းမှာ စိန်ခေါ်မှုများရှိကြောင်း ဥပမာအနေဖြင့် စစ်ဖြစ်လျှင် အစိုးရဘက်ကကော နှစ်ဘက်စလုံးမှ ကလေးစစ်သားတွေစုဆောင်းခြင်းတွေရှိပါသည်။ ဒါဏ်ခံနိုင်အောင်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးကျွေးပြီးစေခိုင်းမှုများရှိနေကြောင်း။ စစ်ဒါဏ်ကိုခံစားနေသူတွေမှာလည်း စိတ်ဒါဏ်ရာရကာ ခံစားနေရမှုများရှိသည်။ တိုက်ပွဲဖြစ်လျှင် အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းသည် အုပ်ချုပ်မှုမဟုတ်တော့ကြောင်းနှင့် စစ်ဗျူဟာမှ Black Area ကြေငြာကာ စစ်တပ်မှအုပ်ချုပ်မှုပြုပြီးအုပ်ချုပ်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားကြောင်း၊ NCA ထိုးခြင်းသည် ကောင်းတာရှိသလို မကောင်းတာတွေလည်းရှိနေကြောင်း။ ထို့အပြင် တူညီသောအခွင့်အရေးခွဲ ယူမှုတွင် တွေမှာပြသာနာတွေရှိလာကြောင်း။ အကြောင်းရင်းတခုမှာ အချုင်းချင်း ရန်တိုက်နေမှုဖြစ် ကြောင်း မြွက်ကြားကာ အောက်ပါ မေးခွန်း (၃) ခုအား မေးမြန်းခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပါသည်။
- NCA ထိုးရင်ဘာအကျိုးအမြတ်တွေရမလဲ ဘာတွေဆုံးရုံးမလဲ
- ကရုဏာအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ဘယ်အခန်းကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ရမလဲ
- မြန်မာပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းကြာရှည်ဘာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးမရတာလဲ။
ဟောကြားချက်အပြီးတွင် တက်ရောက်သူများအားလုံးအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်မှာ- မြန်မာနိုင်ငံဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမရသနည်း။ KMSS အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် မည့်သည့်အပိုင်းနိုင်ပါဝင်ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သနည်း။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကရုဏာအဖွဲ့အစည်း၏ စီိမံခန့်ခွဲမှုစံအဆင့် (CI MS) ကို KMSS National Director Dr. Win Tun Kyi မှ ဝေမျှခြင်း
KMSS ဗဟိုရုံးမှ နေရှင်နယ် ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ ရစ်ချက် ဝင်းထွန်းကြည် မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Caritas အဖွဲ့အစည်း၏ စီိမံခန့်ခွဲမှုစံအဆင့် (CI MS)နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေမျှပေးခဲ့ပါသည်။ Caritas အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်ပက်သက်ပြီး မိခင်အသင်းဖြစ်သော Caritas Internationalis ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းများအကြောင်းကို ဆွေးနွေးဟောကြားခဲ့သည်။ Caritas စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံကိုလေ့လာရန်လိုအပ်ပါကြောင်း။ ဖာသာရ်အမား ဟောကြားလေ့ရှိ သည့် “၀” သုံးလုံး၊ တနည်းအားဖြင့် 3W (Word, Wordship and Witness) တွင် ကရုဏာလုပ်ငန်းသည် Witness ဟူသည့် အလုပ်ဖြင့်သက်သေပြသော အသင်းတော်၏ လုပ်ငန်းကြီး ၃ ခုမှ ဒေါက်တိုင်ကြီးတစ်တိုင်ကိုလုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲအစည်းလည်း ဖြစ်ပါကြောင်း။ ရဟန်းမင်းကြီးအရှင်မြတ်၏စာချွန်တော်တွင် ကရုဏာလုပ်ငန်းများသည် လူထုကိုအလုပ်အကျွေးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲသားများကို အလုပ်အကျွေးပြုသောအခါ ကျွန်တော်တို့လုပ်ပုံကိုင်ပုံသည် စနစ်တကျ ရှိရမည်။ ပုံစံတကျရှိရမည်။ စနစ်တကျဖြစ်နိုင်ရန်အတွက် မူဘောင်များ၊ စံနှုန်းများလိုအပ်သည်ဟု ထောက်ပြထားကြောင်း။ မူ၊ဘောင်၊စံ အတိုင်းဖြစ်နိုင်ရန် အတွက် Caritas Internationalis Management Standard နှင့် CI ၏စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မူဘောင် စံနှုန်းများပေါ်ထွက်လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးအရှင်မြတ်ဖရန်းစစ်က လူမှုကူညီ ကယ်ဆယ်ရေး၊ လူမှုထောက်ပံ့ရေး၊ လူသားချင်းစာနာမှုရှိသည်ဟု ပြောရာတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် တူညီသော လုပ်ငန်းများပါဝင်မှသာလျှင် အသင်းတော်ဟု ခေါ်သည်ဟုမိန့်ခဲ့ကြောင်း။ ကရုဏာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင့်အချို့သော ကရုပြုရန် အရေးကြီးသောစကားလုံး တွေရှိပါကြောင်း။ ဥပမာ-
၁။ ကရုဏာရေးလုပ်ငန်းလုပ်သောအခါ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ ဒါတွေမရှိလျှင် မှန်ကန်သောလုပ်ငန်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
၂။ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အခြားသူများကို ပြရန်တာဝန်ရှိသည်။
၃။ ကရုဏာရေးလုပ်ငန်းတွေသည် အမှန်တရားတွေဖြစ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်သောသူများနှင့် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု တွေသည် ကရုဏာရေးလုပ်ငန်းလုပ်သောအခါ မည်သို့မှခွဲ၍ မရပါ။
ဆင်းရဲသားများကို စောင့်ရှောက်သောအခါ သူတို့၏ရပိုင်ခွင့်ကို ဖြည့်စည်းပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုသော Standard ကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင် ဆင်းရဲသားများကို အလုပ်အကျွေးပြုခြင်းသည်လည်း အဓိကလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည် ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ်အသင်းတော်ဆရာတော်ကြီးများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်နေခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် နှင့် လျှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့အတွက်ကြောင့် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည်အဖွဲ့အစည်း၏အကျိုးအတွက်နှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် သော ၀န်ထမ်းများ၏အကျိုးအတွက်လည်းဖြစ်ပါကြောင်း ဟောကြားခဲ့သည်။
ဟောကြားချက်အပြီးတွင် တက်ရောက်သူများအားလုံးအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်မှာ- KMSS၏မဟာဗျူဟာတွင် OD အပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်အပိုင်းကိုနှစ်သက်အားကျကြောင်းနှင့် အဆိုပါ မဟာဗျူဟာကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်မည်သည့်အချက်များ ထပ်မံဖြည့်စွက်သင့်ကြောင်း စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးကြပါသည်။